Saldhigga: Sidee loo helaa wax la mid ah Unlocker-ka GNU / Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Saldhigga: Sidee loo helaa wax la mid ah Unlocker-ka GNU / Linux?
Fure waa codsi isticmaalka qasabka ah ee Windows. Markii aan isticmaali jiray Windows XPKa dib darawalkeyga qalabka, waxay ahayd waxa ugu horreeya ee aan rakibo.
Muxuu sameynayay Fure? Hagaag, waxay si fudud u dishay geedi socodyo qaar oo sudhan oo aan u oggolaanayn in laga saaro aaladaha laga saari karo. Tani waxay dhacday ka dib markii aan ciyaarnay fiidiyow, ama markii aan fulinay fayl kasta oo qalabka ku jiray.
Waa hagaag, gudaha GNU / Linux Waxaan sidoo kale haysannaa qaab aad u fudud oo tan lagu sameeyo, oo leh terminaalka, dabcan. Markii aan isku dayno inaan ka furno aaladda la saari karo oo aysan noo oggolaanayn inaan sidaa yeelno, waxaan fulinnaa amarka soo socda:
Markaa waxaan si mug leh u tuuri karnaa mugga.
Indhaha: Waa inaan tan sameynaa markaan kaliya aqrinayno feylasha qalabka kujira. Waan cadeeyay, maxaa yeelay waxaa lagayaabaa inaan ku duubno feylal aad u waawayn isla markaana aysan u oggolaanaynin furfuristiisa maxaa yeelay ma aysan dhammaystirin ku qoritaanka qalabka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Saldhigga: Sidee loo helaa wax la mid ah Unlocker-ka GNU / Linux?
ahh taasi waa mid waxtar leh oo aanan aqoon, guud ahaan waxaan aaladda bilaabayaa marka aan loo oggolaanayn inay soo saarto
Faahfaahin wanaagsan, ma kala furfuro qalabka
Kahor aqrinta maqaalkaaga ma aanan maqal wax, iyo wax ku saabsan "fuser", mana ahan wax ku saabsan "unlocker". Markii aan akhriyay ka dib waxaan ka fikiray "umount" (iyo sidoo kale "dil"), laakiin wali ma aanan fahmin waxa dhabta ah ee "fuser" uu sameeyay. Waxaan bilaabay raadinta oo waxaan helay maqaal waxoogaa sifiican iigu cadeeyay (iyo waxa ay ku kala duwan yihiin "umount" iyo "dil"). Waxaan u dhigay xiriirka haddii ay faa'iido u tahay qof kale oo akhriya maqaalkaaga.
Waan ka warqabay dhibta ay leedahay in meesha laga saaro qalab anigoon horey u kala jabin, laakiin ma aanan ogeyn nidaamka markii uu xirnaa, mahadsanid talooyinka.
David Cuevas dijo
aad u faa'iido badan, had iyo jeer aad uga fiican linux.net
Jawaab David Cuevas
Xarunta softiweer cusub ee Fedora?
Raadiyaha xirmada ee kala-soocyada kala duwan